Tobannaan kun oo imtixaan 'Covid-19' ah oo sugaya dalka Koonfur Afrika - teles relay
Tobannaan kun oo Imtixaan-qaadyo ah oo loo yaqaan 'Covid-19') ayaa laga sugaya Koonfur Afrika
By Chinde On Juun 14, 2020
MLS waa soo laabatay: Sidee horyaalku, ciyaartoygu ula qabsanayaan COVID-19…
Nick Cordero, Jilaa Broadway, wuxuu dhintey 41 kadib dagaalkii uu la galay shirkadda 'Covid-19…
CVEID-19: waxay naftooda u huraan kuwa kale
Dhamaadkii Maay, dalka, oo ku dhaqma siyaasad baaritaanno ballaaran, ayaa ku dhawaad ​​100 oo tijaabo ah oo sugaya in la falanqeeyo. Arinta, wacyigelin caalami ah oo dib u soo celinta Xarunta dhexe ee faafa cudurka 'Covid-19' ee qaaradda, Koonfur Afrika ayaa sidoo kale ah dalka sameeya tijaabooyinka ugu badan. In ka badan 1 milyan oo qof ayaa la baaray tan iyo markii uu fayrasku soo gaadhay dhulka 5-ta Maarso. Waxaa ka mid ah, 58 xaaladood oo togan - iyo 568 dhimasho ah. Tiradan ayaa labanlaabantay laba toddobaad gudahood, iyada oo la xaqiijinayo ka dib markii si buuxda loo wada hayo bishii Abriil, in la fududeeyay bishii Maajo, in waddanku galay wajigii kobcinta faafa.
Si loo raaco horusocodka cudurka, waddanku wuxuu hirgaliyay siyaasad tijaabo ah oo ballaaran, iyadoo la fulinayo qiyaastii 15 oo baaritaan maalin kasta. Laakiin shaybaarrada ayaa ku dhibtoonaya inay xawaare yeeshaan. Dabayaaqadii bishii Maajo, dalka waxaa ku dhawaad ​​000 oo qof sugayey in la tijaabiyo, sida ay sheegtay Wasaaradda Caafimaadka.
Sidee Koonfur Afrika u maamushay (illaa hadda) si ay u jiliciso waddada
Asalka dhibaatada taraafikada: qalab la'aan. "Waxaan wajahaynaa yaraanta caalamiga ah ee soo-celinta, caqabadda oo dhibaato badan ku noqota dalal badan", Waxaa xusid mudan Wasiirka Caafimaadka Zweli Mkhize Maajo 26, war-saxaafadeed uu soo xigtay News24. Dhowr maalmood ka dib, dawladdu waxay ugu dambeyntii go’aansatay inay muujiso daahfurnaan heerka dhabta ah ee dhibaatada ka dib toddobaadyo diidmo ah. “Dib u dhac ma leh”, muddo dheer sii hayey Adeegyada Qaranka ee Sheybaarka Caafimaadka (NHLS), oo mas'uul ka ah tijaabooyinka, halka wararka xanta ah ee jiritaanka taraafikada taraafikada ay sii kordhayay tan iyo bishii Maarso, sida lagu xasuusto Mail & Guardian.
24 saac ilaa 14 maalmood natiijooyinka
Mawduuca si kastaba ha ahaatee wuxuu u qalmaa daahfurnaan. Dib-u-dhacaani wuxuu saameyn weyn ku yeeshay awoodda go'aaminta sida fayrasku u fido oo ay bulshada ugu gudbinta ugu badan. Waxa kale oo ay shuruud uga dhigaysaa sida ay dawladdu u maareyso yaraanta ilaha caafimaad ee ay haatan haysato ”, wuxuu hoosta ka xariiqay Mail & Guardian.
Dib-u-dhigista falanqaynta tijaabooyinka ayaa sidoo kale micnaheedu yahay in dadka togan ay sii joogi karaan maalmo iyaga oo aan ka warqabin xaaladdooda, halista ugu jirta in ay ku dhacdo dadka ku dhow. Meelo badan oo dalka ah, [waqtiga loo qabtay helitaanka natiijooyinka] wuxuu socday afar iyo labaatan saacadood ilaa shan iyo afar iyo toban maalmood ”, dheh laba khabiir oo a gole ku yaal goobta gaarka ah Bekhisisa.
Akhri ALSO#AlcoholMustFall. Koonfur Afrika: annaga oo ka soo goosanayn qayaxan, ma waxaan si cad u mamnuuceynaa iibinta khamriga?
Si loo xalliyo dhibaatada, isla qorayaasha waxay ugu baaqeen dowladda inay si deg deg ah dib ugu eegto istiraatiijiyaddeeda tijaabinta barta ay daabacday Daily Maverick horraantii Juun. Nidaamka baarista Mass "Sida muuqata ma tixgalinayo xaqiiqada dhibaatada ee saamaynta ku leh awooda South Africa inay taageeraan tijaabooyinka" Covid-19 ".
Taa bedelkeeda, waxay kugula talinayaan hirgelinta siyaasad la sii bartilmaameedsaday: “Kheyraadka tijaabada ee xaddidan ee laga heli karo Koonfur Afrika […] waa in lagu uruuriyaa halka baahiyaha ugu badan ay ka jiraan, xarumahayaga caafimaad.”
In ka badan 55s iyo kalkaaliyayaal caafimaad
Waxaa si sax ah dib ugu milicsanaya istiraatiijiyaddeeda tijaabada ah in gobolka galbeedka Cape, oo ah kuwa ugu badan ee uu cudurku ku faafay waddanka, uu si caadi ah u maareeyay xallinta dhibaatada maalmihii dhawaa, wararka News24 :
Dib-u-dhaca ayaa si aad ah hoos ugu dhacay tan iyo markii [gobolku uu xadidanaa tijaabadiisa dadka ka weyn 55, kuwa qaba astaamaha Covid-19 iyo daryeel bixiyaasha. ”
Sida laga soo xigtay sarkaalka caafimaadka ee gobolka, tirada baaritaanada la sugayo waxay ka yimaadeen 28 dhammaadkii May illaa 000 illaa Arbacadii 3-kii.
Wadan ahaan, awooda daryeelka ayaa sidoo kale soo fiicnaanaya. Bishii Juun 10, Koonfur Afrika waxaa ka jiray "in ka badan" 63 oo tijaabo ah oo sugaya, sida ay muujinayaan tirooyin ka socda Shaybaarka Adeegyada Caafimaadka Qaranka oo ay baarayaan. GanacsigaTech. Marka laga soo tago maqnaanshaha wax raadinta, Afrika guud ahaan waxaa soo foodsaaray tijaabooyin gaagaaban oo qarin kara xaqiiqda cudurka faafa ee qaaradda. "Waa inaan haysanaa alaab laga sameeyay Afrika, ma sii wadi karno inaan soo galno alaabada aasaasiga ah", ayuu yiri agaasimaha Xarunta Xakameynta iyo Kahortagga Cudurrada Afrika, John Nkengasong, dabayaaqadii May.
isha: https: //www.courrierinternational.com/revue-de-presse/crise-covid-19-en-afrique-du-sud-des-dizaines-de-milliers-de-tests-en-souffrance
Chinde 93 posts 0 comments
Ku faraxsan, Olivier Minne wuxuu soo bandhigayaa buuggiisa ugu horreeya
Boqoradda Elizabeth II: gadaal ka daawo muuqaalka diyaarinta dhalashadeeda gaarka ah ee Windsor Castle
Nin kale oo dhintay oo ku sugnaa Leboudi quarry, ayaa dhawr tallaabo ka soo qaaday Yaoundé!
Sidee Ahmed Rahhou u doonayaa inuu sare u qaado xiriirka ka dhexeeya Morocco iyo Midowga Yurub - Dhallinyar…
Jean-Pascal Zadi: "Tout si fudud noir waa filim Faransiis ah, xitaa franchouillard, ...
Gantaalka roodayaasha ee NASA's SLS ayaa u furan sida dunta daloolka ah - BGR
xnxx: 6 talo oo jacayl lagu sameeyo inta lagu guda jiro safarka wadada